साउन ६, काठमाण्डौ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल(टान) को निर्वाचन मिति नजिकिदै गर्दा अन्तरपार्टी प्रतिष्पर्धाको मनोबिज्ञान उच्च हुँदै गएको छ । भन्नलाई व्यावसायिक नेतृत्व भनिएपनि आफु उमेद्धवार उठ्ने की नउठ्ने, ककसको सहयोगमा उठ्ने, कुनै व्यावसायीले आफुलाई नेतृत्वमा उछिन्ने पो हो की, यस्तै चिन्तामा घेरिएका छन, टानका नेतृत्व आकांक्षीहरु ।
अंकगणितको हिसाब किताबमा आफुलाई अब्बल पाउनेहरुले मिठा भाषण पनि दिईरहेकै छन, नहुनेले सहमतियको रटान पनि लगाएकै छन ।
यही भिडमा सिताराम सापकोटा नेतृत्वको नेकपा निकट ‘पर्यटन व्यावसायी संगठन नेपाल’ का उपाध्यक्ष अन्जन थापा(कुमार)ले टान नेतृत्वमा उमेद्धवारी घोषणा गरेका छन ।
टानका अध्यक्ष महेन्द्र सिंह (२००९–२०११) का पालामा टान कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका कुमार युवा व्यावसायीका रुपमा परिचित छन ।
टानमा उमेद्धवारी घोषणापछि असाई ट्रेकका थापाको जित्ने संभावना केकति छ, बुझ्ने कोशिस गरेका छौ ।
अन्जन थापा(कुमार) सँगको कुराकानी ।
१.टानमा नेतृत्वको उमेद्धवारी घोषणा गर्नुभाछ, चुनाब जित्न की हल्ला गर्न ?
टानमा कुशल नेतृत्व हुंदाहुंदै पनि बिगत केही बर्ष यता प्राबिधीक कारणले टानले गति लिन सकेको छैन । व्यावसायिक हकहित लाई रक्षा गर्दै टानमा आईपरेका समस्यालाई हटाउनका लागि मेरो उमेद्धवारी हो ।
२. सर्बसहमतिय की चुनाबी प्रतिष्पर्धा ?
सर्बसहमतिय हुँदा राम्रो । नभए चुनाब लड्नलाई समस्या छैन ।
३. हार्नुभयो भने ?
पर्यटन व्यावसायमा काम गरेको १९ बर्ष भैसक्यो, एक खालको उचाई पाईसकेको छु, व्यावसायी साथीहरुलाई कन्भीन्स गर्ने कोशिस गर्छु, अहिले एलायन्स पनि मेरै पक्षमा छ, चुनाब जित्छु ।
४. टानमा धेरै पैसा छ, कुदेर नेतृत्वमा पुग्न पाएँ अपचलन गर्न पाईन्थ्यो भन्ने हो ?
त्यो बिल्कुल होईन, कसैले सोचेको छ, भने पनि त्यो सही होईन । पहिलो कुरा त टानमा अपचलन गर्ने गरी पैसा नै कहाँ छ र । अपचलन नै गर्छु भनेर कसैले पनि नेतृत्व दाबी गरेको हुँदैन । सदस्य नबिकरणबाट केही पैसा उठ्छ, टिम्स रकम प्राप्त हुन सकेकै छैन, पैसा भए ऋण लाग्ने नै थिएन ।
५. टानको अहिलेको नेतृत्वको कार्यशैली हेर्दा खाईदेवान की कर्मशिल ?
प्रयत्न गर्नुभएको हो । कतिपय नितिगत कुरामा सरकारसँग समस्या भएजस्तो लाग्छ । टिम्स रकममा बोर्डले ढिलासुस्ती गरेपछि बेरुजु देखिएको अवस्था हो । पैसा खाएका छैनन ।
६.तर नवराज दाहालले टानमा अब एक रुपैयाँ पनि ऋण छैन, टानलाई मैले धनी बनाईदिए भन्नुभएको छ त ?
खर्च र आम्दानीका स्रोतहरु स्पष्ट खुलेर बाहिर आएको छैन, टिम्स रकम पनि ११, १२ करोडको हाराहारीमा उठ्ने गर्छ, पर्यटन बोर्डबाट भ्याट कटाएर तिनचार करोड टानको खातामा आउँछ, यसरी हेर्दा टानको ऋण चुक्ता हुन सक्छ । तर टिम्स रकममा पर्यटन बोर्डको भुमिका सहजीकरणतर्फ छैन, स्थीति सहज छैन भन्न खोजेको हो ।
७.तपाई नेतृत्वमा पुग्नुभयो भने उत्पातै गर्नुहुन्छ होला है ?
उत्पात गर्दिन, व्यावसायिक मुद्धालाई नजिकबाट बुझेको छु । डोल्पा, हुम्ला पदयात्राका समस्या र निराकरणमा टानले खेल्नुपर्ने भुमिका प्रभावकारी छैन, चिनियाँ पक्षसँग यसअघि भएका एमओई लाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्छु । संभावनालाई मर्न दिने छैन, पर्यटन समृद्ध छ, यसलाई फुल्ने अवसरको खाँचो छ, त्यसैलाई पुरा गर्नेछु ।
८. तपाई को सँग डराईरहनुभएको छ ?
मलाई डर लागेको छैन । साथीहरुले मैले उठाएका मुद्धालाई सहयोग गर्नुहुन्छ ।
९.तपाईको प्रतिष्पर्धी को ?
व्याक्तिगत रुपमा कुनै एकल व्यक्ति मेरो प्रतिपर्धी होईन, छैन ।
१०. तर मुक्ति पाण्डेले मै हो, अबको टान नेतृत्व भन्नुभाछ, तपाई उहाँलाई सहयोग नगर्ने ?
उहाँ पनि हाम्रै पार्टीको हुनुहुन्छ, संगठनभित्र छलफल हुन्छ, त्यसमा जसको नाम स्वीकृत हुन्छ, मलाई स्वीकार छ ।